တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ လာအိုနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Lyying Sayaxang အားလကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ဇနျနဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၉ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီ – ၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lyying Sayaxang အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံ အမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Col. Boungmyvieng Viengnhoutthasatနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်ကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်း နှီးမှု ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ ထူးခြားမှု အနေဖြင့် မြန်မာ-လာအိုနှစ်နိုင်ငံ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သာသနာတော်ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးနှင့်ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရေးအတွက် မိမိ၏ပင့်ဖိတ်ချက်အရ လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတ နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓဘာသာဗဟိုအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ကြွရောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် အကြီးအကဲများလည်း အပြန် အလှန် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် နိုင်ငံတကာအလယ်၌ လာအိုနိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အမှန်အတိုင်းရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့်အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ကောင်းမွန် အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုနှင့် ဆက်လက်၍တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေများ၊ နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေများ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြားယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ အပြန်အလှန်စေလွှတ်၍ နှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုများဖလှယ်နိုင်ခဲ့မှုနှင့် အားကစား အဖွဲ့များ၊ အဆင့်အလိုက်ချစ်ကြည်ရေးခရီးများ အပြန်အလှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေများအား ရင်းရင်း နှီးနှီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား အမှတ် တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ခဲ့သည်။
နပွေညျတျော၊ ဇနျနဝါရီ – ၉
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ တာဝနျပွီးဆုံး၍ပွနျလညျထှကျခှာမညျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာလာအိုနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Lyying Sayaxang အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီးစိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံသံ အမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Col. Boungmyvieng Viengnhoutthasatနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားတကျရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံသံအမတျကွီးအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၌ တာဝနျထမျးဆောငျခြိနျကာလအတှငျး နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျး နှီးမှု ပိုမိုတိုးတကျကောငျးမှနျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့သညျ့အတှကျ ဝမျးမွောကျဂုဏျယူပါကွောငျး၊ ထူးခွားမှု အနဖွေငျ့ မွနျမာ-လာအိုနှဈနိုငျငံ ထရေဝါဒဗုဒ်ဓဘာသာ၊ သာသနာတျောထှနျးကားပွနျ့ပှားရေးနှငျ့ခဈြကွညျ ရငျးနှီးမှုမြား ပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာစရေေးအတှကျ မိမိ၏ပငျ့ဖိတျခကျြအရ လာအိုပွညျသူ့ဒီမိုကရကျတဈ သမ်မတ နိုငျငံ၊ နိုငျငံတျောဗုဒ်ဓဘာသာဗဟိုအဖှဲ့ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌဆရာတျော ဦးဆောငျသညျ့ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ မွနျမာ နိုငျငံသို့ပထမဆုံးအကွိမျကွှရောကျနိုငျခဲ့ကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံနှငျ့နှဈနိုငျငံတပျမတျော အကွီးအကဲမြားလညျး အပွနျ အလှနျ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြားဆောငျရှကျနိုငျခဲ့ကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျဖွဈပျေါလကျြရှိသညျ့ အခကျအခဲ အကွပျအတညျးမြားအား ဖွရှေငျးဆောငျရှကျလကျြရှိရာတှငျ နိုငျငံတကာအလယျ၌ လာအိုနိုငျငံ အနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံအပျေါအမှနျအတိုငျးရပျတညျဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျ့အတှကျ အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နှဈနိုငျငံနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ကောငျးမှနျ အောငျဆောငျရှကျနိုငျခဲ့မှုနှငျ့ ဆကျလကျ၍တိုးတကျ ကောငျးမှနျအောငျ ဆောငျရှကျမညျ့အခွအေနမြေား၊ နယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနိုငျမှုအခွအေနမြေား၊ တပျမတျောနှဈရပျ အကွားယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြား အပွနျအလှနျစလှေတျ၍ နှဈနိုငျငံယဉျကြေးမှုမြားဖလှယျနိုငျခဲ့မှုနှငျ့ အားကစား အဖှဲ့မြား၊ အဆငျ့အလိုကျခဈြကွညျရေးခရီးမြား အပွနျအလှနျဆောငျရှကျနိုငျမှု အခွအေနမြေားအား ရငျးရငျး နှီးနှီးဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံသံအမတျကွီးအား အမှတျ တရလကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျခဲ့သညျ။
နိုငျငံတျောစီမံအုပျခြုပျရေးကောငျစီဥက်ကဋ်ဌ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဘဏျမြားအသငျး နာယက၊ ဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား၊ ပုဂ်ဂလိကဘဏျမြားမှ ဥက်ကဋ်ဌမြား၊ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌမြား၊ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့တှဆေုံ့(ရုပျသံသတငျး)
၂၀၁၉ ခုနှဈ သာသနာတျောဆိုငျရာဘှဲ့တံဆိပျတျောမြား ဆကျကပျပူဇျောပှဲနှငျ့ ဆှမျးဆနျစိမျး လောငျးလှူပှဲ အခမျးအနားကငျြးပ
မတျ ၂၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0